“အိမ်မှာပဲ Stay Home နေရင်းနဲ့ သူမ ဘဝမှာ ပထမဆုံးလုပ်ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ အရာလေးတစ်ခုကို ချပြလာတဲ့ ပိုပို” - Myannewsmedia
“အိမ်မှာပဲ Stay Home နေရင်းနဲ့ သူမ ဘဝမှာ ပထမဆုံးလုပ်ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ အရာလေးတစ်ခုကို ချပြလာတဲ့ ပိုပို”
ပရိသတ်ကြီးရေ အဆိုတော်မလေး ပိုပိုကိုတော့ အထူးအထွေမိတ်ဆက်ပေ စရာမလိုအောင် ပရိသတ်ကြီး လည်း ချစ်ခင်ရ င်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်.။ ပိုပိုကတော့ “ချစ် ဖူးခဲ့သမျှ” သီချင်းကနေ စတင်ကာ ပရိသ တ်တွေရဲ့ အားပေးချစ် ခင်မှုတွေကို အပြည့် အဝရရှိခဲ့သူဖြစ်ပြီး ဂီတလောကမှာ ကိုယ်တို င်ရေး ကိုယ် တိုင်သီဆိုသူ အဆိုတော် မလေးတစ်ယောက်အေ နနဲ့ ရပ်တည်နေသူပဲဖြစ်ပါတ ယ်နော်.။
ပိုပိုကတော့ သူမရဲ့ နေ့ရက်တွေကို ပျော်ရွှင်စရာတွေနဲ့အတူ ဂီတနုတ်လှလှလေးတွေကို ဖန်တီးကာ ပျော်ရွှင်နတတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဒီနေ့ စက်တင်ဘာလ (၁၆)ရက်နေ့မှာတော့ ပိုပိုက “ပို့ရဲ့ ဒီမနက် လုပ်ဖြစ်တဲ့ အကြောင်းလေး မျှဝေချင်ပါတယ်.။ ကဲ နားဆွဲလေး တွေ့လား ?? အဲ့ဒါလေးက ပိုပို ကိုယ်တိုင် လက်နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ပထမဆုံး လက်မှူ ပညာ နားဆွဲ လေးပါ .။ ရောင်းရင်ကောင်းမလား???? ဘယ်လိုလို ဖြစ် ဖြစ် ပိုကတော့ အရမ်း ပျော်နေပါတယ်ရှင့် .။ covid က အတွေအကြုံအသစ်တွေ ရစေပါတယ်.။ ပရိတ်သတ်တွေလည်း အပျင်းပြေ လက်မှူပညာလေးတွေ လုပ်ရင်း၊ စာတွေ ဖတ်ရင်း၊ အပင်စိုက်ရင်း အချိန်ကုန် ကြပါစေရှင့်.။
#ပိုပို #popo #Myveryfirst #handmade #earrin” ဆိုပြီး သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်လာခဲ့ပါတယ်.။ ပရိသတ်ကြီးလည်း Covid (19)ပိုးကြောင့် စိတ်ညစ်နေကြမယ့်အစား stay Home နေရင်း ကိုယ့်ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုလေးတွေကို ရှာဖွေရင်း အသစ်သစ်သော အရာလေးတွေကို လုပ်ဆောင်ကာ ပျော်ရွှင်နေသူ ပိုပိုကို ချစ်ခင်အားပေးရင် မှတ်ချက်လေးတွေ ရေးခဲ့ပါဦးနော်.။ ဖတ်ရှု့ပေးခဲ့ကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးလည်း ပျော်ရွှင်သာယာတဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်.။
Source: PoPo’s Facebook
Previous post ကိုဗစ် ကာ လမှာ ချစ်သူေ လးနဲ့ မတွေ့ရတာကြာလို့ အရင် ကအချိန်တွေကိုပဲ သတိရနေရတယ်ဆိုတဲ့ ဘုန်းလျှံ
Next post Stay Home ကာလမှာ တစ်ယောက်တ စ်နေရာစီဖြစ်ေ နပေမ ယ့် ပရိသ တ်တွေရင်ကိုအေးမြစေဖို့ ဖန်တီးပေးခဲ့ကြတဲ့ မအေးသောင်း၊ အိချောပိုနဲ့ မေမြင့်မိုရ်